Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football any Belzika Radja Nainggolan tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; "Ninja". Ny tantaran'ny Radja Nainggolan momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra ho anao ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny ankamaroan'ny zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra fa iray amin'ireo mpilalao miditra sy tsara indrindra sy tsara indrindra any Eorôpa izy, saingy vitsy no mihevitra ny Biografia Radga Nainggolan izay mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Radja Nainggolan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Voalohandohan'ny fiainana
Radja Nainggolan dia teraka tamin'ny 4 ny volana 1988 tany Antwerp, Belzika. Teraka tamin'ny reniny efa-dahy Lizi Bogaerts Nainggolan sy ny rainy, Marius Nainggolan. Nantsoin'izy ireo hoe Radja izay midika hoe "Mpanjaka". Radga dia teraka kambana. Izy dia niarina niaraka tamin'ireo rahalahiny telo mirahalahy sy rahavavy kambana, izay antsoina hoe Riana Nainggolan. Ity ambany ity ny foto-pianakaviany.
Tany Belzika dia nobeazina tany amin'ny foko Flamita izy saingy nijanona tamin'ny indonezianina. Amin'ny teny fototra, izy dia Indonezianina avy amin'ny Batak sy ny finoana, izay mpikambana ao amin'ny Fiangonana Batak Christian Protestant.
Mbola nanangana Katolika Romanina i Radja ary niteny tsara teny anglisy, anglisy ary italiana, ary nahay teny Frantsay. Toy ny zazalahy kely, i Radja dia nanatri-maso ny fifandraisana tsy dia lavitra loatra teo amin'ny ray aman-dreniny. Nifankahazo tamin'ny fianakaviana ny rainy, nivoaka avy teto Belzika ary niverina ho an'i Indonezia. Radja, ny iray tam-po aminy sy ny reniny dia tsy maintsy niaina tamin'ny tenany manokana, fa tsy nanana vola. Ny ankizy rehetra izay niaina nandritra ny fialan-tsasatry ny ray aman-dreny dia hahafantatra tsara ny fanaintainana ara-pihetseham-po lalina izay azony atao. Niteraka voka-dratsy ara-tsaina teo amin'i Radja izany. Ny vokatr'izy ireo dia nisy fiantraikany teo amin'ny fivelarany izay niaretany nandritra ny fahazazany.
Radja sy ny rahavaviny kambana, Riana dia nahazo famporisihana avy amin'ny reniny mba hiady amin'ny baolina kitra raha mieritreritra fa mety samy hahomby daholo na ny iray amin'izy roa. Ankoatra izany, ny fahafantarana ny fahaiza-manaony sy ny toerana niavian'izy ireo, i Lizi Nainggolan dia nahita ny baolina kitra ho fampahalalam-baovao ho an'ireo zanany mba hiala amin'ny fahantrana.
Radja Nainggolan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Karohy amin'ny famintinana
Ny filalaovan'i Radja ho an'ny baolina dia nanomboka tamin'ny dimy taona. Niaraka tamin'ny anabaviny izy dia nanomboka nilalao tao amin'ny Tubantia Borgebout, klioba kely avy any amin'ny tanàna niaviany. Tamin'ny taona 10 izy dia nifindra tany Germinal Beerschot, ekipa iray tao amin'ny sidina ambony Belzika. Tamin'izany no nahatsapany fa ny baolina dia tena ho azy sy ny kambana tiany. Mba hamerenana fiarovana ary tsy handiso fanantenana ny reniny, tsy nitsahatra nianatra i Radja. Izy sy ny rahavaviny kambana, Riana dia teo an-tampon'ny kilasiny.
Radja dia nijanona tao Germinal Beerschot hatramin'ny 2005, raha nanamarika an'i Alessandro Beltrami izy izay nanampy azy hifindra ho any amin'ny ekipa Serba B Serie Piacenza mba hanamora ny fialany amin'ny asany. Taorian'ny asa vitany nandritra ny fahatanorany, dia nanentana ny ekipany izy. Tao 2010, nifindra tany Cagliari izy ary nilalao nandritra ny vanim-potoana telo ho toy ny safidy tsy azo antoka.
Ny asany miaraka amin'ny Rossoblu dia nahatonga azy ho malaza indrindra tamin'ireo mpanohana azy, izay nanonona azy tao amin'ny lisitry ny 11 ambony ahitana mpilalao tsara indrindra amin'ny tantaran'ny klioba Sardinian. Izany no nanosika an'i Roma hanaraka ny tolotr'izy ireo amin'ny 2014. Ny ambiny, araka ny filazany, ankehitriny dia tantara.
Radja Nainggolan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Relationship Life
Ny baolina dia tena hazo volamena ho an'i Radja. Toerana iray nahitany alokaloka sy miala amin'ny zava-misy mahavariana azy. Angamba, nisy hazo volamena iray hafa izay nitondra alokaloka sy fampiononana bebe kokoa, dia ny fihaonan'i Claudia vady malalany.
Claudia Nainggolan Lai sary etsy ambany dia ny vadin'i Radja Nainggolan. Tena tsotra izy, nidina tety an-tany ary vehivavy iray mahafinaritra izay tsy miraharaha ny fiainany andavanandro.
Izy no mamaritra ny fomba nihaonany tamin'i Radga ..."Nihaona tamin'i Radja tao Cagliari aho ary fitiavako voalohany. Rehefa nianatra aho taorian'ny roa volana fa mpilalao baolina kitra izy, dia te hiala aho. Fantatro fa be atao ny mpilalao baolina matihanina iray, ary betsaka kokoa ny mpankafy azy ireo. Tamin'izany fotoana izany dia niasa tao amin'ny toeram-pivarotana lehibe iray manontolo aho, mbola tsy azoko hatramin'izao. Raha sendra sahiran-tsaina ny masony, dia nahatsikaritra ny fahatsaràny aho rehefa nilaza tamiko izy fa tia ahy izy, ary mahagaga ihany koa amin'ny voalohany. Rehefa nilaza izy fa handeha ho any Roma dia tsy noraisiko tsara. Any Rome, ny tsirairay dia manao akanjo tsara, tsy toy ny an'i Cagliari. Nila fotoana aho talohan'ny nifanarahako. Taona iray aho dia nanomboka nivoaka niaraka tamin'ny kiraro. Mbola tsy nahavita ny fiainako voalohany aho, ka nahazo fahafahana bebe kokoa hanao zavatra sasany. "
Samy nanapa-kevitra ny handefa ny knot amin'ny 2011 i Claudia sy Radja Nainggolan. Ity manaraka ity ny fampakarambady sary izay natao tamin'ny fotoana niavaka ny Cinecittà World, ny kianja fampisehoana an'i Castel Romano, Italia.
Ny fanambadian'izy ireo dia notahina niaraka tamin'ny vokatry ny kibo avy hatrany. Aysha Nainggolan zanak'izy ireo vavy dia teraka tamin'ny andro 30T of January 2012.
Tia manaraka ny fitiavany i Radia, Radja Nainggolan, ao an-drenivohitra noho ny zava-misimisy vaovao miaraka amin'ny zanak'izy ireo izay bitika kely amin'ny sary etsy ambany.
Ireo mpivady dia nahita ny fotoana fisakanan 'ny fanambadiana na dia nandritra ny fitsangatsanganana aza ary nandao azy io. Vao haingana, nandalo adihevitra marobe notaterin'ny media sosialy ireo mpivady ireo.
Ny Polisy Italiana dia nanery ny fiampangana an'i Radja Nainggolan noho ny fanararaotana, fandrahonana sy herisetra tamin'ny vadiny. Claudia. Soa ihany fa nanova ny fahasamihafany ry zareo.
Radja Nainggolan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Manomboka, Radja dia nahazo ny ràn'i Batak avy amin'ny rainy, Marianus Nainggolan izay misioka avy any Indonezia. Tena ilaina ny manambara fa i Radja Nainggloan dia avy amin'ny fianakaviana mahantra iray noho ny fisaorana ny rainy, Marius izay nandao ny fireneny, Indonezia, nanantena fa hanao azy ho lehibe ao Belzika mba hahita fiainana mbola sarotra aminy ny handalo any Belzika.
Izany no nanosika an'i Marianus Nainggolan hiverina any Indonezia hanohy ny raharahany. Androany ny asa mafy nataony dia nandoa ny vidiny. Raha toa ka nahavita izany tamin'ny lalao baolina ny zanany lahy sy ny zanany vavy dia lasa mpandraharaha mariazy tao amin'ny toeram-ponenan'i Bali izy.
Ao Piacenza ihany koa Radja Nifanaraka tamin'ny rainy Tsy tahaka ireo mpilalao baolina kitra toy izany Deli Ali.
Ny fotoana dia nitranga tamin'ny faran'ny 2007 aFter taona marobe 13. "Mifankahita indray izahay amin'ny farany. Tonga avy any Bali mankany Italia i Papa mba hahita ahy sy i Riana " Hoy i Radja izay tsy nanaja ny fahotan'ny rainy tao am-pony.
Mother: Ny renin'i Radja dia avy amin'ny fiaviany. Talohan'ny fanambadiana dia nantsoina hoe Lizi Bogaerts izy tany am-boalohany. Lizi dia nanambady an'i Marius ary nanova ny anaram-baviny tany amin'ny Nainggolan. Indrisy fa maty tao amin'ny 2010 i Lizi, telo taona latsaka taorian'ny niverenan'ny vadiny tsy handao azy. Taorian'ny nahafatesany, Radja dia nanao elatra roa lehibe teo an-damosiny niaraka tamin'ny daty nahaterahany sy ny fahafatesana. Araka ny hita etsy ambany. Raha ny marina, i Radja dia nanolo-tena tanteraka tamin'ny reniny.
anabavy: Riana Nainggolan no kambana zandriny amin'ny reniny, Radja. Izy dia teraka andro iray taona noho ny anadahiny tao Antwerp, tamin'ny volana 3, 1988.
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny daty nahaterahan'ny anadahiny dia 4th of May, 1988. Riana Nainggolan, rahavavin'ny rajan'i Radja, toy ny anadahiny ihany koa dia milalao ho an'ny baolina kitra AS Roma, toy ny tamin'ny fotoana nanoratana azy. Mizara ny tantaran-draharahan'ny rainy izay tsy nandao azy afa-tsy taminy ihany izy, fa ny fianakaviany tamin'ny toe-javatra mahasosotra.
Talohan'ny nahatongavan'i Roma tao Riana Nainggolan dia mbola nirotsaka an-tsehatra tamin'ny lalao baolina fandriampahaleman'ny vehivavy Belzika, Kontich. Nitarika ny ekipany ho malaza izy fifaninanana nasionaly any Belzika.
rahalahy: Manuel Noboa sary eto ambany dia ny antsasaky ny rahalahin'i Radja Nainggolan. Ny zavatra voalohany fantany momba azy dia i Cheloa Fan Chelsea.
Navoakan'i Manuel Noboa, renivohitr'i Radja, tamin'ny filazam-baovao; "Nataoko ary nazava be tamin'ny fotoana marobe izay i Radja rahalahiko, tokony handeha ho any Chelsea. Ny Premier League no tontolo iainana tsara indrindra amin'ny fahalemeny. Mampalahelo fa tia an'i Roma izy. "
Radja Nainggolan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Tattoo facts
Radja Nainggolan, Belzika miaraka amin'ny fakàna ny Indoneziana, dia tsy isalasalana fa lehilahy lamaody. Hatramin'ny nahatongavany tany Roma tamin'ny 2014, nitombo isan-taona ny isan'ireo baolina kitra. Tsy vitan'ny hoe miatrika ny lalao eny an-kianja izy, fa amin'ny fisehony ivelany sy ny tatoazy tsy hita isa eo amin'ny vatany manontolo izay tonga amin'ny fanaintainana.
Radja Nainggolan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Tattoo Collection
Tao anatin'ny fanadihadiana marobe, nanambara izy fa ny tatoazy rehetra dia manana ny heviny ary manokana azy, indrindra ireo izay natokana ho an'ny reniny efa tara.
Ankoatra ny mijery ny volony, Raha manao radio radiôgrafika Radja Nainggolan isika, mahita paradisa feno tatoazy, ny sasany dia rakotry ny vaovao, toy ny iray eo amin'ny vozony izay mamaky; "Ny fiandohana" (Ny fiandohana). Ankoatra izany, ny daty nanondro ny Romanina izay nilalao ny lalao voalohany tao Piacenza dia nosoloina fo iray feno elatra izay mamaritra ny tendany Belza. Zahao etsy ambany;
Ny hita any amin'ny faran'ny vatana dia ny tatoazy mahery eo amin'ny tendany. Ity ilay rose avo mahafatifaty.
Misy bibilava lava lava izay mandalo amin'ny torso ary eo anelanelany dia misy tatoazy amin'ny teny Anglisy: "Miaingà fa aza miboridana. Ny fitiavana tsy miankina. Henoy fa tsy miaro. Lazao tsy manafintohina ". Ambany ny bibilava dia misy ireto andininy manaraka ireto: "Fiainana iray, faniriana iray" (Fiainana iray, faniriana iray).
Nainggolan dia manana tranolay maitso eo amin'ny sandriny havia ary Bouddha aseho eto ambany. Ambonin'ny tranolay dia voninkazo lotus. Manana ny anaran'ny zanany vavy voalohany izy io "Alisa" eo amin'ny soratry ny tanana havia sy kintana maromaro. Ao amin'io sandry io ihany, dia manana ny anaran'ny reniny amin'ny fiteny Elvish.
Manakaiky ny ankihibe, Radja manana dice, iray amin'ny laharana 5 (Ny atao hoe MAY, ny volana nahaterahany) ary ny iray hafa, laharana 4, (Ny dikany, teraka tamin'ny andro 4X ny volana May) izy. Manana soratra koa izy izay milaza fa ... "Fitiavana mandresy" (tiako ny handresy) eo ankaviany. Eo amin'ny tanany ankavanana, misy iray milaza hoe ..."Ny fankahalàna ho very" (tsy tiako ny ho very).
Radja dia tsy misy tatoazy eo amin'ny tongony. Ao amin'ny feny ankavanana dia nanao tati-mikôpônina misy kapa ary ny voalohany RN4 izy. Ny fisehoan-javatra hita bebe kokoa ao amin'ny sary etsy ambany dia dragon-tahotra iray eo amin'ny feny havia.
Ao amin'ny zanak'omby, manana anaram-paty "ninja" izy miaraka amin'ny isa 4. Ao amin'ny shin dia ahitana ny anaran'ny rahavaviny kambana amin'ny teny Shinoa sy ny ankilany, ny mariky ny dollar sy "Las Vegas".
Ao amin'ny tongotra havia dia misy bokotra kely (latabatra) ary eo anoloana, sabatra iray misy maso iray.
Radja Nainggolan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -Fiainana manokana
Radja Nainggolan dia manana ny toetrany amin'ny toetrany.
hery: Mendri-pitokisana izy, mahari-po, azo ampiharina, miorina na mendri-piderana.
fahalemena: Mety ho mafy loha, be herimpo ary tsy afa-po izy.
Inona no tian'i Radja: Tattoos, manana volo miavaka, fambolena, mozika, romantique, akanjo ambony ary miasa amin'ny tanana.
Izay tsy tia an'i Radja: Fiovàna tampoka, fifamatorana misy fifandraisana, tsy fahampian-tsakafo sy hatsembohana.
Raha fintinina, Radja dia azo ampiharina sy miorina tsara. Izy dia tia olona hijinja ny vokatry ny asany. Tsapany fa ilaina ny hodinihina amin'ny fitiavana sy ny hatsaran-tarehy ary mikarakara sy manandrana ny hevi-dehibe rehetra. Nainggolan dia vonona ny hiaritra sy hifikitra amin'ny safidiny mandra-pahatongany ho eo amin'ny fahafaham-po manokana.
Radja Nainggolan Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy mbola voatanisa -ny fifohana sigara
Niresaka tamim-pahatsorana ihany koa izy momba ny sigara nifoka sigara nandritra ny tatitra fa vao haingana no nandao ny mpanazatra Belzika Roberto Martinez noho ny fahazaran-dratsiny.
'Tsy menatra aho satria mifoka sigara ary tsy niafina mihitsy aho.' Nainggolan dia nilaza tamin'ireo mpanao gazety tany ivelan'ny tobim-piofanana Belzika. "Fantatro fa tokony hanome ohatra tsara aho, manan-janaka aho ... Fa mpilalao baolina ihany aho, manao ny asako. Fantatry ny rehetra fa mifoka aho ary tsy afaka manafina izany, fa tsy menatra aho.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pahaterainay Radja Nainggolan miaraka amin'ny zava-misy marina momba ny tantaram-piainana. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Daniele De Rossi Tantara Momba Ny Tantaram-pahagagana Nataon'ny Firenena Mikambana
Emerson Palmieri Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra